Genesis 20 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Ogyee Sara fii Abimelek nsam (1-18)
20 Na Abraham tu kɔɔ+ Negeb asaase so kɔtenaa Kades+ ne Sur+ ntam. Bere a Abraham te* Gerar+ no, 2 ɔkaa ne yere Sara ho asɛm bio sɛ: “Ɔyɛ me nuabea.”+ Enti Gerar hene Abimelek soma ma wɔkɔfaa Sara brɛɛ no.+ 3 Ɛnna Onyankopɔn baa Abimelek nkyɛn anadwo wɔ dae mu, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Ɔbea a woakɔfa no yi, woawu awie,+ efisɛ ɔyɛ obi yere.”+ 4 Nso na Abimelek mfaa ne ho nkaa no.* Na ɔkae sɛ: “Yehowa, enti worebekum ɔman a wɔn ho nni asɛm?* 5 Ɛnyɛ ɔno ara na ɔka kyerɛɛ me sɛ, ‘Ɔyɛ me nuabea’? Na ɔbea no nso anka sɛ, ‘Ɔyɛ me nuabarima’? Me komam fitaa; ɛnyɛ adwemmɔne na mede yɛɛ saa.” 6 Ɛnna nokware Nyankopɔn no ka kyerɛɛ no wɔ dae no mu sɛ: “Minim sɛ wo komam fitaa na woyɛɛ saa, enti na masiw wo kwan na woanyɛ bɔne antia me. Ɛno nti na mamma woamfa wo ho anka no no. 7 Afei fa ɔbea no kɔma ne kunu,+ efisɛ ɔbarima no yɛ odiyifo, na ɔbɛsrɛ ama wo+ na woanwu. Na sɛ woamfa no ankɔ a, kae hu sɛ wo ne wo fifo nyinaa, owu na mubewu.” 8 Abimelek sɔree anɔpatutuutu frɛfrɛɛ ne nkoa nyinaa, na ɔkaa nea asi nyinaa kyerɛɛ wɔn. Na wɔbɔɔ hu paa. 9 Afei Abimelek frɛɛ Abraham na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Dɛn na wode ayɛ yɛn yi? Dɛn koraa na mayɛ wo a wode bɔne kɛse yi aba me ne m’ahenni so yi? Nea wode ayɛ me yi nye.” 10 Na Abimelek san bisaa Abraham sɛ: “Dɛn koraa na ɛbaa wo tirim a enti woyɛɛ saa?”+ 11 Ɛnna Abraham kae sɛ: “Mekae wɔ me tirim sɛ, ‘Onyankopɔn ho suro paa de, ebi nni ha, na anhwɛ a me yere nti wobekum me.’+ 12 Na ɔyɛ me nuabea nso ampa, ɔyɛ me papa ba, nanso ɔnyɛ me maame ba; ɛnna ɔbɛyɛɛ me yere.+ 13 Bere a Onyankopɔn ma mifii me papa fi dii atutena+ no, meka kyerɛɛ no sɛ: ‘Ɔdɔ a enni huammɔ a mepɛ sɛ woda no adi kyerɛ me ni: Baabiara a yɛbɛkɔ no ka sɛ meyɛ wo nuabarima.’”+ 14 Afei Abimelek maa Abraham nguan ne anantwi ne nkoa ne mfenaa, na ɔde ne yere Sara san maa no. 15 Abimelek kae nso sɛ: “M’asaase na ɛda w’anim yi, tena baabiara a wopɛ.” 16 Na ɔka kyerɛɛ Sara nso sɛ: “Merema wo nuabarima no nnwetɛbona 1,000.+ Eyi na mede rekyerɛ sɛ wo ho nguu fĩ* wɔ wɔn a wɔka wo ho nyinaa ne obiara anim; wo ho nni asɛm biara.” 17 Na Abraham bɔɔ nokware Nyankopɔn no mpae; na Onyankopɔn saa Abimelek ne ne yere ne ne mfenaa yare, na wofii ase woo mma. 18 Nea ɛwom ne sɛ, Abraham yere Sara nti, na Yehowa ama mmea a wɔwɔ Abimelek fi nyinaa ntumi nwo.*+
^ Anaa “bɛyɛɛ ɔhɔho wɔ.”
^ Kyerɛ sɛ, na ɔne no nnae.
^ Anaa “ɔman trenee.”
^ Anaa “Eyi na mede retew w’anim.”
^ Anaa “na Yehowa ato mmea a wɔwɔ Abimelek fi nyinaa yafunu mu.”